Laanta socdaalka oo tobban sanno ka dib nin Neeyjeeriyaan ah musaafurineeysa | Somaliska
Laanta socdaalka ee duleedka magaaladda Göteborg, ayaa waxaa xarrunteeda tarxiilka ku jira nin u dhashay wadanka Neeyjeeriya oo lugu magacaabo Emmanuel, ninkan ayaa dalka Iswiidhan soo galay sanadkii 2007-dii, muddo gaaban ka dibna waxaa uu helay sharcigii degenaanshaha dalka. Markaa ka dib waxaa uu dabaray noloshiisa isagoo waxbasharo galay ka dibna shaqo helay.
Ninkan oo sheegtay inuu yahay kuwa lugu tilmaamo qaniisiinta ayaa dalkan markuu soo galay oo xaaskiisa ay kala tageen bartay nin kooxdaas ka mid ah, dalkiisa haddii lugu celinayo la dilayo. Wuxuu sheegay in sanadkii 2009-kii ay laanta socdaalka la soo xirriireen kuna wargeliyeen in si qaldan loo diiwaan geliyey codsigiisa magangalyo lagana doonayo inuu la soo xirriiro si uu saxo. Balse cabsi uu ka baqay in la tarxiilo ay sababtay in dhagaha uu ka fureeysto.
Sanadkii 2012-kii ayuu codsaday codsi shaqo, hase ahaatee waxaa laga horkeenay diidmo. Sanadkii 2013-kii wuxuu racfaan ka qaatay go’aanka diidmo. Hase ahaatee natiijo kama soo bixin dalabyadiisii is daba jooga ah. Sidoo kale sanadkii 2015-kii ayey laanta socdaalka ku adkeeysatay in dalka ka musaafuriso. 17 bishii juun ee sanadkana waxaa boolisku afar sanno ka dib ka kaxeeyeen gurigiisii iyagoo ku xareeyey waaxda tarxiilka, bishuu luulyo ee isla sanadkana wuxuu codsaday codsi lugu joojinayo in la tarxiilo sababo uu ku sheegay inuu ka mid yahay ragga qaniisiinta ah Balse laanta socdaalka waxeey ku adkeesteen go’aankoodii hore si kasta oo u soo gudbiyo sababo suuragal ah oo tarxiilka ka baajin karo.